ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်သော မြန်မာစစ်အစိုးရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်သော မြန်မာစစ်အစိုးရ
ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်သော မြန်မာစစ်အစိုးရ
Posted by ေရႊဘိုသား on Aug 5, 2011 in Copy/Paste |9comments
ကျနော်လည်း စာမရေးဖြစ်တာကြာပြီ ပိုက်ဆံမရှိလို. ဆိုပါတော. လိုင်းစောင်.ရတာနဲ.တင်
ပိုက်ဆံကမလောက်ဖြစ်နေတာနဲ. သိပ်မရေးဖြစ်တော.တော အခု မနက်ပိုင်းလေမို. ဆိုဒ်လေးတွေ ဝင်ကြည်.လိုက်တာ
ပြည်သူတွေကို တော်တော်ချစ်တဲ. အစိုးရအကြောင်းမို.လို. သိသင်.တယ်ထင်လို.တင်ပေးလိုက်တာ
သူများဆိုဒ်ကနေ ကော်ပီ လုပ်တင်တာပါ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဆိုဒ်ကပါ
မသိသေးတဲ. ရွာသားတွေအတွက်ပါ ကျနော်ကတော. မနည်းကို ကျော်ခွပြီး ဆိုဒ်ကိုဝင်ရတယ်
MG ဆိုဒ်တစ်ခုထဲကိုပဲ ဝင်ဖတ်တဲ. ရွာသားတွေအတွက်တော. အကျိုးရှိမယ်ထင်လို. တင်လိုက်တာပါ
http://burmese.dvb.no/archives/13724 ကိုဝင်ကြည်.လိုက်ပေါ. ဒီအကြောင်းတွေ တော်တော်များများ
ကော်ပီကူးလို. အပြစ်တင်လည်း ခံရမှာပါပဲ ကျနော်ကတော. သိသင်.တယ်ထင်လို. တင်လိုက်ပါပြီ
ဟိုတစ်နေ.က ပို.စ်တစ်ခုလို တရုတ်ကြီးမှ ရက်စက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဗမာကြီးက ပိုဆိုးပါတယ်လို.
ပြောချင်ပါတယ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေဆိုတော. စိတ်တူကိုယ်တူပေါ.ဗျာ
ရွာအနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပါက မီးရှို့မည်ဟု အစိုးရတပ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် အဲဒီရွာကို မီးရှို့မယ်လို့ အစိုးရတပ်က ရွာသူကြီးတွေကို ခေါ်ပြီး ပြောဆိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
ခလရ ၆၄ က မီးရှို့ခဲ့သည့် ကျေးသီးမြို့နယ် ခိုထွန်ရွာမှ ဦးနန်လိုင်၏ အိမ် (ဓာတ်ပုံ – SHRF)
ကျေးသီးမြို့နယ် မိုင်းနန်း၊ မိုင်းကောင်၊ နောင်ဆွမ်း၊ ဝမ့်ပန် စတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုက တိုက်နယ်သူကြီး၊ ရွာသူကြီးတွေ အားလုံးကို လင်းခေးအခြေစိုက် ခလရ ၉ က ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်က မိုင်းနန်းကျေးရွာမှာ ခေါ်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွာလူကြီးတွေအနေနဲ့ မိမိအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာအနီးမှာ တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ပွားရအောင် တာဝန်ယူကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပါက အဲဒီရွာကို မီးရှို့ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် ရွာသားတွေ ခြိမ်းခြောက်ခံရတာ၊ ဒဏ်ပေးခံရတာတွေက အမြဲကြုံနေရတယ်လို့ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီး ပိုင်ဖက ပြောပါတယ်။
ရှမ်းတပ်မတော်ဘက်ကတော့ တတ်နိုင်သလောက် ရွာသားတွေကို ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ရှောင်တိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“သူကြီးတွေက ဘာမှ တတ်နိုင်ပါဘူး၊ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်လည်း မသိဘူး။ နောက် သူတို့ ကင်းလှည့်တာလည်း မရှိဘူး။ တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် ရွာသားပေါ်က ပစ်လာပေးတာ။ တကယ်ဆိုတော့ သူတို့က သူကြီးကို အဲဒီလို ပြောခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ အက်စ်အက်စ်အေက သူတို့ မတိုက်အောင် ကာဘာပေးဖို့ အမိန့်ပေးထားတာ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ အက်စ်အက်စ်အေတပ်က ရွာသားတွေကို ထိခိုက်မှု မရှိအောင် သို့မဟုတ် တိုက်ပွဲကြီးတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကြိုတင်ပြီးမှ သတင်းပေးထားတာ ရှိတယ်။ ရွာသားထိခိုက်နည်းအောင်လို့ ကျနော်တို့ ရှောင်ရှားရမှာပေါ့။”
အစိုးရတပ်ဘက်က ခုလို သတိပေးခြိမ်းခြောက်ပေမယ့် မပြောမဆိုနဲ့ မီးရှို့ခံရတဲ့ အိမ်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တုန်းက ကျေးသီးမြို့နယ် ခိုထွန်ရွာနားမှာ အစိုးရတပ် ခလရ ၆၄ နဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။
အစိုးရတပ်က ရွာထဲကို လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ပြီး ရွာထဲက အိမ်ကြီးတအိမ်ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ ကျေးသီးဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
အစိုးရတပ်က တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ဖြတ်လေးဖြတ် စနစ်နဲ့ စစ်ဆင်နေတာမှာ ရွာသားတွေကိုလည်း သတင်းပေးလို့ စွပ်စွဲပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာ၊ ရွာတွေရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာ၊ စားနပ်ရိက္ခာကို အကန့်အသတ်နဲ့ သယ်ဆောင်နေရတာ၊ လမ်းပိတ်ခံရတာ စတဲ့ ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ခံနေရပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်သူပုန်တွေကို ရွာထဲမှာလက်ခံထားတယ်၊ အားပေးတယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ နောက်ဆုံးပတ်က ရှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း လဲချားမြို့နယ်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ လင်းခေးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရွာပေါင်း ၄ဝ လောက်က အိမ်ခြေ ၃၀ဝ ကျော်ကို နယ်မြေအခြေစိုက် အစိုးရတပ်ရင်း ၆ ရင်းက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းက ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမှော်မြို့နယ်၊ ဝါးရှောင်ကျေးရွာမှ ရွာသား ၂ ဦးကို မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ ခလရ ၂၁ က ပစ်သတ်လိုက်တယ်လို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့က ဝါးရှောင်ကျေးရွာမှ အသက် ၄ဝ အရွယ် ကချင် အမျိုးသား ကွန်ဒွတ်နဲ့ နော်လားနော် တို့နှစ်ဦးဟာ ကျေးရွာအနီးရှိ သူတို့ရဲ့ တောင်ယာကို ပေါင်းမြက်ရှင်းဖို့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားရောက်ခဲ့ကြရာ ပြန်မလာတဲ့အတွက် ကျေးရွာသားတွေက သွားရောက် ရှာဖွေကြရာ သေနတ်ပစ်ခံထားရတဲ့ အလောင်းတွေသာ တွေ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ရွာထဲကလူတွေ စုပြီးမှ သွားရှာတဲ့ခါကျတော့ တောင်ယာထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း အပစ်ခံရတာ။ နှစ်ယောက်စလုံးသေနေတာ။ မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ အဲဒီက ဗိုလ်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌကို လာပြောတယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ် ကျနော့်လူတွေ ပစ်လိုက်တာ၊ လူမှားသွားတာလို့ ပြောတယ်တဲ့။ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ကြောက်တော့ အထက်လူကြီး တွေကိုလည်း မပြောပေးဘူး၊ သူ့တို့ မိသားစုတွေကတော့ ဘယ်မှာတိုင်ရမှန်း မသိဘူးပေါ့ဗျာ။
အဲဒီကျေးရွာသားနှစ်ဦးကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ ဝါးရှောင်ဆည် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ ခလရ ၂၁ က တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီးက ဝါးရှောင်ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌ ခေါယိန်းအား အခုလို မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုအပေါ် အထက်ကို တိုင်ကြားတာတွေ မလုပ်ဖို့ ဖိအားပေးခဲ့သလို လိုအပ်လာရင် စစ်ကြောင်းတွေအတွက် ပစ္စည်းထမ်းခိုင်းဖို့ ရွာသား အယောက် ၅ဝ အသင့်ရှာထားပေးဖို့ ပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံက ပြောပါတယ်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်း ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအစိုးရအကြား နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲတွေ၊ မိုင်းခွဲတာတွေ ကြိုးကြားရှိနေတာကြောင့် ဒေသခံတွေ ကြောက်လန့်နေကြရာ အခုအခါ ဝါးရှောင်ကျေးရွာမှ ကျေးရွာသားအချို့ မြစ်ကြီးနားမြို့ကို ပြောင်းရွွှှေ့နေကြတယ်လို့ ဒေသအတွင်းကလာတဲ့ သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
တော်တော် ရက်စက်တာပဲဗျာ အခုလို လုပ်ပုံဆိုရင် လူတွေကို
ဒါမှစစ်တပ်ပိသမှာပေါ ဘာတွေလုပ်ပေးနေပါပြီ ညာလုပ်ပေးနေပါပြီဆိုပြီပြောနေကြတဲလူတွေကို ဒီသတင်ကို
အစ်မ MOEPWINTPHYU လည်းရွှေဘို သူပဲဆို ပို.စ်လေးဘာလေး တင်ပါအုံး
့ပဲခူး မှာအရပ်သား နှစ်ယောက်ကို သတ်တုန်းကလည်း ဟိုလိုလိုဒီလိုလို နဲ.ပြီးသွားတာ
အခုလည်း လူမှားပစ်တာပါတဲ. ကောင်းရော
ရက်စက်ချက်ကတော. ကန်းကုန် ပဲဗျာ
ဒီမန်းလေးဂေဇက်ပဲဖတ်ဖြစ်တာဆိုတော့ ရွှေဘိုသားပြောတော့လည်း သိရတာပေ့ါ
(ရွာထဲကလူတွေ စုပြီးမှ သွားရှာတဲ့ခါကျတော့ တောင်ယာထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း အပစ်ခံရတာ။ နှစ်ယောက်စလုံးသေနေတာ။ မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ အဲဒီက ဗိုလ်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌကို လာပြောတယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ် ကျနော့်လူတွေ ပစ်လိုက်တာ၊ လူမှားသွားတာလို့ ပြောတယ်တဲ့။)
ရိုးနေပြီလေ .. ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကတည်းက မြင်ရတာ ကြက်သီးတောင် ထတယ် .. ။ ဝမ်းနည်းတယ် … ဒါပေမဲ့ … ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် အသက်လုပြေးနေရတာဆိုတောလေ … ။ ကျဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို စာနာစိတ်နဲ့ အ ဝေးကပဲ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းနေမိတော့တယ် .. ။
ပြောရရင် သူပုန်နဲ့ ရွာဆိုတာ ဆွေမျိုးပဲ။ သူပုန်ဆိုတာ ရွာကလာတာ။ ရွာရဲ့ သား။ ရွာရဲ့တူပါ။ ကိုယ့်တူတစ်ယောက်က သူပုန်ဖြစ်နေတယ်( ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ သူပုန်၊ သူတို့ကတော့ တော်လှန်ရေးသမားပေါ့ )။ ကိုယ့်သားတစ်ယောက်က သူပုန်ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်ပစ်ထားမလဲ။ နောက်မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။ ထောက်ပံ့မယ် ရိက္ခာလိုအပ်ရင် ရိက္ခာ၊ သတင်းလိုရင် သတင်း။
ဒီသူပုန်တွေ မရှိဖို့ဆိုရင် ဒီရွာတွေမရှိမှပဲ ရမယ်။ ဒီတော့ မီးရှို့တယ်။ နောက်သူပုန်အကြောင်းကို ရွာကအသိဆုံး။ ဒီတော့ သိချင်ရင် ရွာကိုပဲ ဖိအားပေးတယ်။ ဒါက ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်း။
ဒါပေမယ့် ရွာသားတွေထဲမှာ အမှန်တကယ် ဘယ်အရှုပ်အရှင်းထဲမှာမှ မပါပဲနဲ့ အေးအေးလူလူနေတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး။ ဒီလူတွေက ပြဿနာတတ်လာပြီဆို ကြားညပ်ခံရတယ်။ နစ်နာတယ်။ နောက်သူတို့အဖေတွေ၊ အစ်ကိုတွေမောင်တွေ ပေါ်တာနောက်ပါသွားတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုအားကိုးမလဲ။ ခိုကိုးရာမဲ့ ကလေးလေးတွေ။
အဲဒီတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ရောပြီးမီးရှို့တာ၊ ရောပြီးသေနတ်နဲ့ ပစ်တာ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါဟာ လူမဆန်တာပါပဲ။ တစ်ခါဆို တပ်မတော်က အငြိမ်းစားတစ်ယောက်ပြောတာကို နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားခဲ့ရတယ်။ အရင်တုန်းက သိခဲ့တာထက် ပိုရင်နာစရာကောင်းတယ်။ ရွာကိုပေါ်တာသွားဆွဲတယ်။ ယောကျင်္ားတွေမရှိတော့ဘူး။ ခရီးသွားသလို၊ ဘာလိုလိုနဲ့ ပေါ်တာရှောင်ကြတာ။ အဲဒါနဲ့ မထူးဘူးဆိုပြီး မိန်းမတွေပဲ ပေါ်တာဆွဲခဲ့ရတယ်တဲ့။ နေ့ဖက်ကုန်ထမ်း (ကျောမှာကျောပိုးအိတ်လိုသယ်ရတာ) ညမှာ သူတိုု့အသုံးတောခံပေါ့။ သူကဆက်ပြောတယ်။
တပ်မတော်မှာ ”ဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူးကွ။ ရေပါဖို့ပဲလိုတယ်” ဒီရက်ဒီရက်အတွင်း ဒီတာဝန်ကို ပြီးအောင်လုပ်ဆိုရင် အပြီးလုပ်ရတာ။ အဲဒီတော့ တို့ကလည်း ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့။
ဒီမိန်းမပေါ်တာတွေက နေ့ဖက် ကုန်ထမ်း – ညဖက် လူထမ်းပေါ့။
သူတို့က .. ပြည်သူတွေကိုသတ်တယ်ဆိုတာ ပျင်းနေပါပြီး.. ဘုရားသားတော်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတောင် သတ်ခဲ့သေးတာပဲ။ ပြည်သူတွေအချင်းချင်းက သနားလို့ပဲရတယ်.. ပြန်တော်လှန်ဖို့ဆိုတာ .. မရနိုင်သေးဘူးထင်ပါတယ်..